माया गर्दा हुने सजाय र लाग्ने कसुर कति ? – आफ्नो प्रेरक संसार
माया गर्दा हुने सजाय र लाग्ने कसुर कति ?
Bibas chetan — १५ जेष्ठ २०७५, मंगलवार २०:१७0comment
रोजन । मैले मन पराउने नाम । नाम मात्र होईन ज्यान पनि मन पर्छ । मन पराउने अधिकार छ/छैन तर मलाई मन पर्छ । यति थाहा छ कि मन पराउदा कुनै प्रकारको सजाय हुदैन । सजाय हुनको लागि त्यो भन्दा बढि हद चाहिन्छ । तर त्यो मबाट हुने छैन ।
गृह मन्त्रालय अन्तरगत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मेरो नियुक्ती भएको दुई वर्षपछि रोजनसँग भेट भएको हो । उ कर्मचारीको हिसावले म भन्दा जुनियर । अफिल मै भेट भयो । भेटपछि चिनजान । चिनजानसँगै एउटै कार्यालयमा भएकोले प्रायः काममा व्यस्त, एउटै फाट भएकोले काममा सहकार्य हुने क्रममा बोलचाल भईरहन्थ्यो । विभिन्न समस्या आईपर्दा पनि समाधानको उपायमा रोजन जुक्ति लागउथे । मलाई उसको चतु¥याई देखेर राम्रो लाग्थ्यो । फुर्सदमा चिया गफ बाहेक फाल्तु गफ गर्ने समय हुदैनथ्यो । विस्तारै समय वित्दै गयो । लामो सँगै एउटै फाँटमा काम गर्दागर्दै मैले उसलाई मन पराउन थालिसके ।
मन पराएपछि मायाको कुरा हुनुपर्ने । तर कहिल्यै पनि भएन । मलाई थाहा थियो, उसले पनि मलाई माया गर्छ भनेर । तर एक वचन पनि माया गर्छु भनेर कुरा राख्न सकेन । समय वित्दै गयो । मायाको भाव आँखामा प्रष्ट देखिन्थ्यो । तर अन्य स्टाफले संका गर्न सक्ने गरि भाव पनि निस्केको थिएन । हामी मायामा डुविसक्यो । तर त्यो माया आँखामा बाहेक कतै देख्न पाईनन्थ्यो । न त शब्द फुथ्र्याे न त हात अघि बढ्थ्र्याे । मात्रा आँखाको मायामा रंगिन भरिन्थ्यौ ।
सँगै एउटै फाटमा काम गरेको पनि एक वर्ष लागि सकेको थियो । चिया गफमा मायाको कुरा हुन नसक्दा पारिवारिक कुराकानी भईहरन्थ्यौ । को को हुनुहुन्छ ? सन्चै हुनुहुन्छ ? घरमा कस्तो छ ? आदी ईत्यादी । माया मनमा थियो तर नेपालको कानुनी अन्योलताले गर्दा हामी आँखामा खुल्न सकेका थियौ । नेपालको कानुनको विषयमा मलाई कसरी अन्योल रह्यो भने मानसिक तथा शारिरिक यातना दिएमा कति कसुर छ भनेर स्पष्ट छ । मानसिक हिंसा गर्नेलाई के कारवाही हुन्छ भनेर पनि खुलाईएको छ । माया भन्दा अलि बढि हद अनैतिक क्रियाकलाप गर्नेलाई पनि सजाय र कसुर स्पष्ट छ ।
तर मेरो अन्योलता भनेको माया मात्र गर्नेलाई नेपालमा के कानुन छ ? त्यसको विषयमा मलाई ज्ञान नहुदा मेरै रोजनलाई माया गर्न थालेछु । उसले पनि त्यहि भएर मलाई माया गर्न थालेको रहेछ । हामी विचमा माया थियो तर किन मायाको कुरा नभई पारिवारिक सस्चो विसन्चोको विषयमा कुराकानी हुन्थौ भने उ र म दुवै विवाहित हौंं । माया गरेकी हु । प्रेम गरेकी होईन । सच्चा प्रेम त मेरो हजुरलाई गर्छु । र मेरो श्रीमानलाई धोका पनि दिन सक्दिन । त्यसैले कसैलाई मायाको भावले हेर्दा के कानुन लाग्छ ? मैले माया गर्दा लाग्ने कसुर छ भने मलाई र उसलाई सजाय गरियोस् ।
संसारमा दु:खको एउटै मात्र कारण हो अज्ञानता
केही संकलित महान भनाइहरू